Dobo fiaran-dalamby dinika / Ardis Technologies 'New HyperDDP12D | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Dynamic Drive Pool / Ardis Technologies 'HyperDDP12D Vaovao
Dynamic Drive Pool / Ardis Technologies 'HyperDDP12D Vaovao
Ny votoatin'ny matihanina amin'ny fampielezam-peo dia mamorona raharaha ary inona koa no mahatonga ny fampisehoana tena tsara dia ny fitaovana misy ny famokarana asan'ny mpanao fampielezam-peo fa tsy ny halehiben'ny famoronana ihany. Saingy ny zavatra tokony hamboarina ihany koa dia ny fitaovana manohana ny fandefasana ilay fampisehoana. Dynamic Drive Pool / Ardis Technologies manampahaizana manokana amin'ity sehatra ity, ary amin'ny vaovao iany HyperDDP12D, Ireo matihanina ao amin'ny indostrian'ny fampielezam-peo dia azo antoka fa hahazo bebe kokoa noho izay efa azony varotra rehefa miantsena ny karazana vokatra avo lenta izay hanao famelabelaran-kevitra rehetra hamoronana mpanorina mpihaino marobe.
Mikasika ny dinika fiaran-dalamby dinika sy teknolojia Ardis
Ny tantaran'ny Dynamic Drive Pool / Ardis Technologies manara-maso hatrany amin'ny Netherlands. Miorina ao Arnhem, ity orinasa holandey ity dia nanomboka ho orinasa TIK teknika niaraka tamin'ny ekipa mpanolotsaina, injenieran'ny rindrambaiko & kaody coding, manam-pahaizana momba ny elektronika, famolavolana ary fitantanana ny vokatra sy fampahalalana. Ity ekipa manam-pahaizana ity dia nifantoka tamin'ny famolavolana vahaolana tokana-fivarotana ho an'ny vokatra na tetik'asa mifandraika amin'ny famolavolana sy rindrambaiko elektronika sy / na fitaovana. Amin'izao fotoana izao, Dynamic Drive Pool / Ardis Technologies dia mitarika ny fifantohany eo amin'ny famokarana sy ny fampandrosoana azy Andian-doka amin'ny dinika dinika.
Dynamic Drive Pool / Ardis Technologies manamboatra ny Andian-doka amin'ny dinika dinika (DDP) ny rafitra SAN miorina amin'ny Ethernet miaraka amin'ny mpanamboatra metadata miorina, ny Ardis Virtual File System AVFS.
The DDP Manolotra tetikasa feno sy fizarana fizarana mifototra amin'ny rakitra ho an'ny fampiharana toy mazoto, Fanapahana farany Pro, Fitaovana Pro, EVS, Adobe, Lohasaha, Telestream, Blackmagic design, DVS, Fahitana Digital, Autodesk sy ny fampiharana hafa rehetra misy format video, audio ary horonantsary avy amin'ny DV mankany 8K / DPX. Ny DDP dia azo ampidirina ihany koa amin'ny rafitra MAM sy Backup, ary izany azo itokisana, azo refesina ary mora ampiasaina. Ny tsipika vokatra DDP Ardis 'dia mandrakotra ny filan'ny orinasa kely, ny famokarana finday, ny oniversite ary ny andrim-pianarana hatramin'ny orinasa lehibe famokarana sy fampitana. satria Ardis Technologies dia orinasan-teknolojia tarihan'ny rindrambaiko, ny asan'ny DDP dia novolavolaina tao an-trano. Ny rindrambaiko rehetra tafiditra ao amin'ny DDP Series dia fananan'ny Ardis Technologies irery ihany, ary tizy fa DDP no SAN mora indrindra manodidina.
Ardis Technologies 'HyperDDP12D
Vaovao ny Ardis Technologies HyperDDP12D dia tena zavatra tokony hahagaga ny matihanina amin'ny fampielezam-peo. Ity fitaovana ity dia ao anatin'ny andian-dahatsoratra vahaolana tsy miankina DDP. Manana bandwidth 1GByte / s izy, ary ampiasaina amin'ny orinasan-dahatsoratra Production, broadcast, ary orinasa Media & Entertainment hafa. Izy io dia miaraka amin'ny seranana roa 10GbE / RJ45 sy slot PCIe 2 fanampiny ho an'ny karatra fizarana. Izy io dia manana fampisehoana SSD haingam-pandeha miaraka amin'ny HD fahaiza-manao audio (6000 track), horonantsary (renirano 35x DNxHD220), ary horonantsary (4K, DPX), 2U, 4TB SSD cache, fahaiza-manao 36 TB, seranan-tsambo 10GbE / RJ45, Ethernet SAN.
Fampahalalana fanampiny an'ny HyperDDP12D ahitana:
V5 rindrambaiko DDP Ethernet SAN misy dikany
Modular sy fahaiza-manao ary bandwidth afaka mivelatra ao anaty rafitra rakitra iray
SSD sy HD arotsaka ny fiarovana fonosana
Slot tokana azo antoka ho an'ny SSD fanampiny sy HD Packs
Tonga miaraka amin'ny warranty 1 taona,
Ny fanampiana azo vidina hatramin'ny 1200 Euro isan-taona
Maimaimpoana maimaimpoana foana ny mpamily desktop. Ny fanavaozana DDP dia ao anatin'ny fifanarahana fanohanana
Ny singa DDP dia an'ny talantalana, ary ny soloina azo amidy eo an-toerana
Archiware P5 napetraka
Azo atolotra miaraka amin'ny fahazoan-dàlana Kyno MAM
Ny sandry mikotrana dia azo omena mandritra 165, - Euro
Fepetra miaraka amin'ireo rindranasa rehetra sy ny rafitra MAM
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny HyperDDP12Ddia tsidiho ny www.ddpsan.com/our-products/hyperddp12d.
Maninona no manampy ny mpampita ny asa dia mahavita asa tsaratsara kokoa ny fiarahana miasa amin'ny Ardis
Isaky ny famelabelarana ataon'ny matihanina amin'ny fampielezam-peo dia misy ambaratongam-pahalalana izay tsy ny atiny ambadiky ny asa ihany no tokony hanombohany rehefa izany no tokony ho fiandohan'izany rehetra izany. Saingy ny haitao ankapobeny koa ao ambadiky ny famokarana dia tokony hanana kalitao avo lenta raha te hanana fiatraikany lehibe amin'ny tsy fananganana marika fotsiny izy ireo, fa amin'ny fananganana karazan'olona mpihaino izay hiverina foana ihany koa. Ardis dia nandray ny andraikiny hisolo tena ny mpanamboatra azy ireo amin'ny fomba tsara indrindra fa tsy hiaraka amin'ny HyperDDP12D, fa amin'ny fitambarany Andian-doka amin'ny dinika dinika.
Ny sasany amin'ireo mpanamboatra miasa miaraka amin'i Ardis Technologies miaraka amin'ny
Serivisy amin'ny Internet AWS Amazon
Elemental an'ny Amazon
sary an-tsaina Communications
Ireo ary maro hafa dia maneho Ardis Technologies ' mpiara-miasa. Ianaro bebe kokoa momba ny orinasa amin'ny fitsidihana www.ddpsan.com/.
ATEME mazoto fampitana injeniera fampitana Engineering fampitana orinasa matihanina sivy Andian-doka amin'ny dinika dinika Dynamic Drive Pool / Ardis Technologies Ny rafitra SAN miorina amin'ny Ethernet Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor HyPerDDP12D Litra Matthews vahaolana tokana-mijanona lahatsoratra famokarana SoftAtHome, MStar, CES2017 Telo sy zana-tsipìka Storage Video injeniera 2020-05-13
Previous: Operator fakantsary / Mpanova lahatsary
Next: Jigsaw24 dia manitatra ny serivisy rahona Via24 miaraka amin'ny fametrahana ny EFSv an'ny EditShare